नपुंसकहरुको राज्य (कथा) Nepal Aawaz – Nepal aawaz
‘विधानले आंैल्याएका प्रत्येक समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका छौं।’
‘हामी के गर्न सक्छौं? अर्थात् राज्यकातर्फबाट कस्तो सहयोग पुर्याउन सकिन्छ?’ अनि गम्भिर ढंगले सोचेको अभिनयमा उसले निदार खुम्च्यायो। अनि सोध्योः विकल्प कुनै छैन?’
अर्की छात्राले थपिन्ः सत्तामा पुग्नेलाई केवल धनराशी नै जम्मा गर्नुछ भने हामी बच्चा पाई दिन्छौं, हामीलाई बच्चा उत्पादन गर्ने मेशीन ठानांै। हुर्किएपछि आँखा र कीड्नी बेचाैं, रगत बेचौं, काम सकिएपछि कि श्रमिक भनेर निकालौं कि कोठीमा पुर्याउने निरन्तरता थामौं। राज्यले अरु के गर्नसक्छ र?
संसदको दारा सहयोग पीठमायसबारे विशद् मीमांशा हुनु थियो, भयो। उज्ज्वल भविष्यको कामना गरेर अब मात्र हस्ताक्षरको काम शेष थियो। तर अकस्मात द्विविधा भो, तिनले हस्ताक्षर गर्न बिर्सेर शर्तनामामा आफू चुकिसकेको कुरा सम्झे। संसदमै गएः नौजवान र नवयुवतीलाई कुनै पनि योजना जन्माएर अथवा वहाना बनाएर यता पठाउने प्रतिज्ञा गर।
अर्काले पनि सम्झ्योः भएजति उद्योग धन्दा बेच्ने, जवानलाई काम साट्न विदेश पठाउने, तरुणीलाई बरालिन दिने, बाबु नचिनिने सन्तान बढाउने, खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गरेर बाँझो राख्ने, सकेसम्म सडक बालक तयार गर्ने र पछि तिनैलाई आफ्नो दलको गुण्डागुटको हुक्के बनाउने, शर्त यस्तै खाले हुन्।
अर्काले आदेश सम्झ्योः तरुण शक्ति नभएको देश कतिञ्जेल टिक्छ? युवा शक्ति नभएको मुलुक बलियो हुन्छ र? बस तरुणी यता पठाउने योजना जन्माऊ, मौका पर्यो कि चौका हान। धेरै दरबन्दी खाली छन् महलमा र कोठीमा। तिमी नै भन न तन्नेरी नभएपछि तरुणी के गर्छन्? त्यसैले युवालाई यस्तो ठाउँमा पठाऊ उसले चाहेको बेला फर्कन नपाओस्।
बैठकमा जति सहभागी थिए तिनमा आधा भन्दाबढी सदस्यले बहुविवाहको लागि ढोका खोल्ने प्रस्ताव गरे। बहुपति पात्रको औचित्य बारे सहयोग पुर्याउने सकारात्मक धारणा राखे। छोरीहरु देश भित्रै हुन्छन्, दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्छन्, सौता माथि थपिन गएपनि सुरक्षित हुन्छन् र भिन्नै घरमा बसेर गृहस्थी चलाउँछन् भन्ने उनीहरुको सोच बन्यो र बैठक टुंगियो।
तपाईँहरुलाई पढाइ र तालिमका लागि होइन बेच्न, गृह दासी बनाउन र कोठीमा पुर्याउन खोज्दै छन्। विचार गरेर मात्र निर्णय लिनु होला। पर्वतीय क्षेत्रका कैयाँै दिदी–बैनीले कोठी भरिएका छन्। यहाँबाट जनसंख्या घटाउन र पुरुष शक्ति हटाउने योजना राज्य सत्ताकै हो जो उतैको इसारामा चल्ने गर्छ। तपाईँहरु पनि यस्तै योजना भित्र फस्दै हुनुहुन्छ। सावधान!’ छात्राहरु यो सावधानपत्र पढिसकेर मन्त्रीलाई नभेटी त्यहीँबाट फर्किए र एउटै वाक्यमा टिप्पणी गरे—नपुंसकहरुको राज्य।’